Hir-Shabeelle oo bixisay amar lagu soo xirayo Yuusuf Dabageed – Puntlandtimes
June 11, 2019 Abdurahmaan Editor
Warqad kasoo baxday Xafiiska xeer ilaaliyaha Maamulka Hir-Shabeelle Cabdulaahi Maxamuud Gacal ayaa waxaa lagu amray in lagu soo xiro guddoomiyihii Gobolka Hiiraan ee dhawaan xilka laga qaaday balse diiday ee Yuusuf Axmed hagar (Dabageed).
Qoraalka ayaa lagu cadeeyay in Yuusuf Dabageed loo heysto fal dambiyeed ay mid yihiin ku xadgudub dastuurka Hirshabelle,abaabulid dagaal sokeeye,kutumasho astaan dowlad goboleed iyo mid qarameed iyo kuwo kale.
Amarkaan uu bixiyay xeer ilaaliyaha Maamulka Hir-Shabeelle Cabdulaahi Maxamuud Gacal ee lagu soo xirayo Guddoomiyihii Gobolka Hiiraan ayaa kusoo aadaya xilli Maanta duleedka Baladweyne ku dagaalameen Ciidamo taabacsan iyo kuwa ka tirsan booliska Hir-Shabeelle.
WAXAAN ka xumahay in DILLAALKAAN darti dhiig u daato. °Hadduuba Dawladda isku taaga WAXAAY ahayd inuu la yimaad sabab dadka qanci karta oo laysu garab istaagi karo MIITHAAL hadduu dhihilaha; “BELEDWEYNE waa magaalo taariikh leh WAA magaaladi DARAAWISHTi waa magaaladi SYL mana hoostegayo Jowhar & Bulo Burti midkoodna” wuxuu helilahaa taageerayaal aan UGU Horreeyo BALSE inu wiilashi XASAN MUUSE ku laayo damac uu leeyahay WAA daanyeernimo uusan hiil iga helayn. WBT